Mumakore achangopfuura, nekukurumidza kukura kwehupfumi hwenyika, iyo indasitiri yemagetsi yakawedzera nekukurumidza, izvo zvakasimudzira kukurumidza kusimudzira kwekutepfenyura mutsetse shongwe indasitiri. Maererano nehuwandu, iyo mari yekutengesa yekutapura mutsetse shongwe indasitiri muChina yakawedzera kubva pamabhirioni mashanu emau muna 2003 kusvika pa42,6 bhiriyoni yuan muna2010, iine CAGR ye36,68%, uye indasitiri iri munguva yekukurumidza kukura. Muna 2010, China kuti hutachiwana mutsetse shongwe indasitiri ane zvakanaka kukura muitiro, uye emakambani ari indasitiri vane yepamusoro utariri uye kudzora kugona mutengo uye mutengo, uye vane simba profitability.
Pakupera kwa2010, 252 yekuparadzira tambo yesimbi shongwe Enterprises pamusoro peyero muChina yakanga yasvika 32.250 bhiriyoni yuan, kuwedzera kwe25.55% gore pagore. Muna 2010, iyo yakazara maindasitiri anoburitsa kukosha kweChina simbi shongwe indasitiri yaive 43.310 bhiriyoni yuan, kuwedzera kwe25.36% gore-ne-gore; mari yekutengesa yaive makumi maviri nemaviri emabhiriyoni yuan, kuwedzera kwe29.06% gore-ne-gore; iyo purofiti yakazara yasvika ku24545 bhiriyoni yuan, kuwedzera kwe43.09% gore-ne-gore.
Munguva yegumi nematanhatu yeChirongwa cheMakore mashanu, China ichawedzera kudyara mugeidhi yemagetsi, iine mari inosvika zviuru mazana maviri nezviuru mazana mashanu nemashanu, ichiverengera makumi masere muzana muzana yemari izere musimba, iri pamusoro pe3.0% kupfuura iro mugore regumi neshanu Ronga nguva. Nekuwedzera kwekudyara mugeidhi yemagetsi, kudiwa kwekutumira mutsetse shongwe kuchawedzerawo nguva dzose, uye tarisiro yekuvandudza yekufambisa mutsara tambo indasitiri yakafara. Iyo yegore inoumbwa nekukura mwero wekutengesa mari yeChina yekufambisa mutsara shongwe indasitiri ndeye 28% kubva muna 2011 kusvika 2012, uye zvinotarisirwa kuti mari yekutengesa yeChina yekufambisa mutsara shongwe indasitiri inosvika RMB 70.3 bhiriyoni.
Angle Simbi Simba Rinofambisa Shongwe, Tube Simbi Sisitimu, Magetsi Angle Simbi Towers, Magetsi Angle Simbi Shongwe, Prefab Simbi Zvivakwa, Kanzuru yeKutaurirana kweMasipare,